Markabka dagaalka Ruushka oo lagu arkay meel u dhow UK - BBC News Somali
markabka dagaal ee boqortooyada HMS St Albans ayaa raacay markan dagaal oo laga leeyahay Ruushka oo lagu magacaabo Gorshkov
Markabka dagaal ee HMS St Albans ayaa sheegay in "dhaqdhaqaaqa markabka Admiral Gorshkov uu ku soo dhowaaday danaha qaran".
Ciidammada boqortooyada ayaa sheegay in dhowaanahay "ay sare u sii kacayeen ciidamada Ruushka ee u soo tallaaba dhanka biyaha UK".
Markabka dagaal ee boqortooyada ee loo garanayo HMS St Albans ayaa sabtidii loo diray "in uu dusha kala socdo markabka dagaal ee cusub ee laga leeyahay Ruushka, Admiral Gorshkov, kaas oo marayay meel aad ugu dhow biyaha UK", sida ciidammada Britain ay sheegeen.
Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa soo saartay sawirka ciidammada markanka HMS St Albans intii uu socday howlgalka dabagalka.
"Kama waabanayo difaaca baddeena, mana u dulqaadanayo gardarro," ayuu yiri xoghayaha difaaca Britain, Gavin Williamson.
"Britain weligeed laguma cabsigelin karo difaaca dalkeeda, dadkeeda iyo daneheeda qaran."
Wuxuu sheegay in ay suuragal tahay "in si dhaqso ah oo dhibaato macquul ah" ay noqoto arrinta, taas oo saameyn dhaqaale yeelato, haddii la jaro ama la carqaladeeyo.
Xog dheeraad ah oo laga xaday ciyaartoy oo la shaaciyay
IS oo ay isu raacday 'tiro yari & guul darro'